ဘေဘီလေး လိုချင်တဲ့ စုံတွဲတိုင်း စားပေးသင့်တာလေးတွေက - Hello Sayarwon
အိမ်ထောင်သက်တမ်းကလည်း ကြာပြီ။ သားဆက်ခြားနည်း တစ်ခုခုလည်း မသုံးထားပါဘဲနဲ့ ဘေဘီလေး လိုချင်တာကို အခုထိ မရသေးဘူး ဆိုတဲ့ စုံတွဲလေးတွေ ရှိလား …….. ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
ဘေဘီလေး လိုချင်တဲ့ စုံတွဲတိုင်း အနေနဲ့ အနေအထိုင် အစားအသောက်လေးတွေကို သေချာလေး ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဘေဘီလေး လိုချင်တဲ့ စုံတွဲတိုင်း စားပေးသင့်တာလေးတွေက ဘာလေးတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
အစားအစာတွေက ဘေဘီလေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနေသလား ……..
Fertility expertတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အာဟာရမျှတတဲ့ စားသောက်မှုတွေက သားသမီးရရှိနိုင်စွမ်းအပေါ်မှာ အများကြီး သက်ရောက်မှု ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အာဟာရမျှတတဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ ဗီတာမင် နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတဲ့ အစားအစာတွေက မမျိုးဥနဲ့ သုက်ပိုးတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု များတာ၊ ဘ​ဝနေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲတာတွေက မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အာဟာရဓာတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ omega-3၊ ဗီတာမင် C၊ co-enzyme Qတို့က ဘေဘီလေး ရရှိစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဇာတ်လိုက် တစ်ဦးကတော့ ဖောလစ်အက်ဆစ်ပါ။ သွေးကြောထဲမှာ ဖောလစ်အက်ဆစ် ပြည့်ဝစွာ ရှိနေတာက ဘေဘီလေးကို မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက် မဖြစ်စေဖို့ပါ ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ဘေဘီလေး လိုချင်တဲ့ စုံတွဲတိုင်း အနေနဲ့ ဘေဘီလေး ရရှိနိုင်ခြေ တိုးစေဖို့အတွက် အခုပြောပြမယ့် အစားအစာလေးတွေကို စားပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဒါတွေက ဘာတွေများ ဖြစ်မလဲ …….
အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ သားဥကြွေခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို ထောက်ကူပေးမယ့် အာဟာရဓာတ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ် နဲ့ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း ခရိုမိုဆုမ်း မူမမှန်မှုတွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘေဘီလေး လိုချင်တဲ့ စုံတွဲတွေအနေနဲ့ နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ ဟင်းနုနွယ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ကိုက်လန်၊ ပဲနံ့သာညွှန့်တို့ ပါဝင်အောင် စားသုံးပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီအစားအစာတွေက သုက်ပိုး အရည်အသွေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
အစေ့အဆန် နဲ့ သစ်သီးခြောက်တွေမှာ အရေးပါတဲ့ ပရိုတင်း၊ ဗီတာမင်တွေနဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ သစ်ကြားသီးမှာ မမျိုးဥတွင်းက ခရိုမိုဆုမ်း ပျက်စီးမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ selenium ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
မျိုးအောင်နိုင်ခြေကို မြှင့်တင်ပေးပြီး မမျိုးဥ ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေး ရရှိဖို့ဆိုရင် အစေ့အဆန်နဲ့ သစ်သီးခြောက်တွေကို စားပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ဘေဘီလေးလိုချင်တဲ့ လေဒီလေးတွေအနေနဲ့ နေ့စဉ် စားသုံးမှုရဲ့ ပမာဏ ထက်ဝက်ကို ကောက်နှံတွေ စားသုံးပေးဖို့ လိုပါမယ်။ အပင်ကနေ ရရှိတဲ့ ပရိုတင်းတွေက ဘေဘီလေး ရရှိနိုင်ခြေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် quinoa ကို စားသုံးပေးတာက နည်းလမ်းကောင်း တစ်ရပ်ပါ။ ဒီ ကောက်နှံလေးက ရာသီစက်ဝန်း မှန်စေပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
ဖရုံစေ့က ဆဲလ်တွေကို ရင့်သန်စေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ ဇင့်ဓာတ် ပြည့်ဝမှုက testosterone (ကျားဟော်မုန်း) နဲ့ semen (သုက်) ပမာဏကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။
ဖရုံစေ့က မျိုးပွားအင်္ဂါဆီကို သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှု ကောင်းစေဖို့ ထောက်ကူပေးသလို မျိုးပွားစနစ်ကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးမှာ မျိုးဥကြွေခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို အဓိကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ဗီတာမင် B6 ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ဗီတာမင် C နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်လည်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
ပိုတက်ဆီယမ် နဲ့ ဗီတာမင် B6 ချို့တဲ့မှုက မမျိုးကိုရော သုက်ပိုးရဲ့ အရည်အသွေးကိုပါ ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေး လိုချင်တဲ့ စုံတွဲတိုင်း အနေနဲ့ မနက်စာမှာ ငှက်ပျောသီး ပါအောင် စားပေးပါ။
ကဲ ….. အခုပြောခဲ့တဲ့ အစားအစာလေးတွေက ဘေဘီလေး ရရှိစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Make note of these5superfoods to deal with infertility https://www.healthshots.com/healthy-eating/superfoods/5-superfoods-to-help-you-increase-and-improve-fertility/ Accessed Date 8 October 2021
Fertility Foods to Boost Your Odds of Conception https://www.verywellfamily.com/fertility-foods-recipes-1959903 Accessed Date 8 October 2021